Ungawana sei vhiza yeGhana? - ALinks
Kuti uwane vhiza yekuGhana yekushanya kana yebhizinesi, unoda kushanyira webhusaiti yemumiriri weGhana padyo newe. Iwe haugone kuita zvese online panguva ino. Pakawanda maconsulates eGhana, unogona kuita zvese nepositi. Asi dzimwe nguva iwe unofanirwa kubhuka nguva yekusangana uye kuenda kune consulate nemagwaro ako. Zviri nyore kune akawanda mapasipoti munyika.
Iwe haudi vhiza yekuGhana kana uine pasipoti kubva kuECOWAS uye kubva kune dzimwe nyika dzeAfrica, Caribbean, uye Asia. nyika. Ona zvimwe zvakawanda pazasi kana iwe uchida visa yekuGhana.
Ungawana sei vhiza kuGhana
Visa yekuGhana imvumo yakapihwa kuti munhu akwanise kufamba uye kupinda muGhana. Visa haisi vimbiso yekupinda muGhana sezvo iri pasi pekuzadzikiswa kwemamiriro panguva yekupinda. Asi, usati wapinda kuGhana unofanirwa kunyorera visa. Ngatikurukurei nhanho dzekutora vhiza kuGhana.
Mhando dzeGhana visa
Aya ndiwo marudzi emavhiza aunokwanisa kushanyira, kugara, kudzidza kana kushanda kuGhana. Mapepa ekukoka aunoda ndiwo mutsauko mukuru pakati pezvikumbiro zveaya mavhiza akasiyana.
Mushanyi/Mavhiza enguva pfupi
Diplomatic uye service visa
Zvinyorwa zvinodiwa kugadzirisa visa yekuGhana
Aya ndiwo mamwe emagwaro aungade kuti uwane vhiza yekuGhana. Gadzirira magwaro anotevera, usati watanga. Ungangoda kuzvirodha mukati mese kuita application.
Yekutanga pasipoti ine 6 mwedzi inoshanda uye angangoita matatu mapeji asina chinhu. Iwo mapeji ekugadzirisa papasipoti yako haana kukodzera kupihwa vhiza. Kana pasipoti yako isingagutsi aya mamiriro, iwe uchafanirwa kuivandudza kana kutora imwe nyowani usati wanyorera vhiza. Iwe unoendesa pasipoti yako yepakutanga, kwete kopi.
Fomu rekunyorera visa rakazadzwa riine siginicha.
Mapikicha maviri ePasipoti saizi yemavara akaiswa kana kunamirwa pafomu rekunyorera. Iwe unofanirwa kutora mafoto aya mukati memwedzi mitanhatu yapfuura.
Kurongedzerwa hotera KANA tsamba yekukoka ine kopi yepasipoti kana Chitupa chemuenzi unodiwa.
Bhizinesi kana kero yekugara uye nhamba dzerunhare.
Zita nekero yepekugara kuGhana.
Tsamba yemvumo kubva kumubereki kana muchengeti wemutemo kumwana ari pasi pemakore gumi nemasere.
Humbowo hweYellow Fever Vaccination Certificate
Matanho ekugadzirisa Visa kuGhana
Kuti uwane vhiza yekushanya application, unofanirwa kusaina pane yepamutemo vhiza yeGhana webhusaiti yemumiriri wako wepedyo.
Aya ndiwo mamwe ematanho. Dzinogona kuve dzakasiyana kana iwe ukanyorera iwe pachako kana nepositi.
Sarudza iyo Rudzi, Nyika Yemugari, Visa mumiriri, uye Kuendesa maitiro. (Post kana Counter services).
Nhanho inotevera ichava rudzi rwepasipoti, uye chiteshi chekusvika muGhana. Zuva rekuzvarwa, Nharembozha nhamba, Email id.
Kuwedzera kungave ruzivo rwemunhu ane chekuita nePasipoti.
Ruzivo rwemugari richava danho rinotevera: Nhoroondo yehunyanzvi / Yebasa, Emergency contact details, Zvekufamba, Pekugara kuGhana, kana ruzivo rwevakakoka.
Kuita kubhadhara. Nzira dzekubhadhara dziripo makadhi eDebit, Kadhi rechikwereti, Net Banking, uye UPI.
Ini ndinoda visa yekuGhana?
Ghana iri muECOWAS, Economic Community of West Africa States. Saka haudi vhiza kana uine pasipoti kubva kune dzakawanda ECOWAS nyika. Aya anoti Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast, The Gambia, Guinea, Guinea-Bissau,
Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, neTogo.
Iwewo haudi visa kana uine pasipoti kubva kune dzimwe nyika dzeAfrica, Caribbean, uye Asia. Aya anoti Jamaica, Kenya, Singapore, Tanzania, Trinidad neTobago, Uganda, Zimbabwe,
Mauritius, Seychelles, Barbados, Rwanda, Guyana, uye St. Vincent neGrenadines.
Marii kuti uwane visa yekuGhana?
Mari yekubhadhara inotsamira kune embassy kana consulate kwauri kunyorera. Ini ndinoratidza pazasi mubhadharo kubva kuMumbai consulate muIndia. Sezvandinoratidza avo vanobva kuNew York Consulate muUS uye London High Commission muUK. Mari yekubhadhara kune aya maconsulates eGhana visa ndeaya anotevera.
Visa imwe chete yekupinda, inoshanda kwemwedzi mitatu i8,500 Indian rupees (INR kana ₹) muIndia. Imadhora makumi matanhatu ekuUS (USD kana $) muUS. Uye imakumi maviri eUK mapaundi (GBP kana £) muUK.
Yakawanda yekupinda vhiza, inoshanda kwemwedzi mitanhatu ndeye 17,000 ₹ muIndia. Iyo i100 $ muUS. Uye i100 £ muUK.
Yakawanda yekupinda vhiza, inoshanda kwegore rimwe i25,500 INR muIndia. Iyo 150 USD muUS. Uye iri 150 GBP muUK.
A single entry transit visa, inoshanda kwemwedzi mitatu i4,200 INR muIndia. Iyo 50 USD muUS. Uye iri 20 GBP muUK.
Yakawanda yekupinda vhiza yekufambisa, inoshanda kwemwedzi mitatu i6,500 ₹ muIndia. Iyo 100 USD muUS. Uye iri 55 GBP muUK.
Iwe unobhadhara imwe mari yekutonga yeINR 1,800 muIndia kune yega yega application.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti uwane visa kuGhana?
Iwo akajairwa vhiza kunyorera anotora angangoita gumi nemashanu mazuva ebhizinesi kubva pazuva rekutumira. Ndiko mushure mekuendeswa kwemagwaro kuGhana High Commission kana mumiriri.
Mamiriro e visa yakapihwa
Mavhiza anopihwa anogona kunge ari ekushanya, kudzidza, bhizinesi, kana mafambiro zvichienderana nechinangwa. Aya ndiwo mamiriro ayo.
• Visa inopihwa inogona kunge iri imwe chete kana akawanda mapindiro.
• Mavhiza anoshanda kwemwedzi mitatu uye anofanira kufamba mukati memwedzi mitatu kubva pazuva raakabudiswa. Mavhiza anoshanda kweanosvika gore 3 ndeechinangwa chaicho.
• Vashanyi vanenge vachishanya nezvinangwa zvebhizimisi vanofanira kuendesa humbowo hwechinangwa cherwendo. Vanogona kuendesa tsamba yekukoka yeGhanain Nationals kubva kune vanogamuchira.
• Vashanyi vanofanirwa kupa tikiti rekudzokera kunyika nekuti vane kodzero yekubvumidzwa. Vangafanira kuratidza humbowo hwemari yenguva yekugara. Vangangove vashandi vanogona kuita basa mukati meiyo mvumo yekubva kune imwe nyika.
• Kana uchibva kunyika isina mumiriri weGhana, unogona kuwana vhiza yechimbichimbi paunopinda. Asi Director weImmigration Service anofanira kuzvibvumidza usati wasvika kuGhana.
• Vashanyi vanogona kugara kwemwedzi mitatu. Kana iyo Ghana Immigration Service ikaona kuti vane rutsigiro rwemari rwakakwana.
• Vashanyi vanopinda sevashanyi havagoni kuwana mabasa. Kunyangwe iyo vacancy ikaitika muImmigrant Quota.
• Vanyoreri vanoshanyira Ghana vanofanira kupa tsamba yekukoka kubva kumuenzi wekuGhana.
• Vafambi vanofanira kuona kuti vane magwaro ose anodiwa vasati vasvika kuGhana.
Murairo wekunyorera visa
Unogona kudhawunirodha ese mafomu evisa kubva kune High Commission webhusaiti.
• Mafomu anofanira kunge ari mukunyora kana kunyorwa nemavara makuru.
• Unofanira kusaina fomu rekunyorera vhiza.
• Unofanira kubatanidza magwaro ose anodiwa kumafomu panguva yekutumira nemagetsi.
• Ruzivo rwupi norwupi runotsausa runoguma nekunonoka kana kurambwa kwechikumbiro chako.
Idzi nguva dzinoenderana nemumiriri, idzi dzinobva kuMumbai consulate yeGhana muIndia.
Nguva dzekutumira dziri Muvhuro kusvika Chishanu 10 am kusvika 12 masikati. Nguva dzekuunganidza Muvhuro kusvika Chishanu 10 am kusvika 12 masikati.
Mufananidzo webutiro uri kumwe kuSekondi-Takoradi, Ghana. Mufananidzo na Joshua Duneebon on Unsplash
Nzira yekuwana sei visa
Nzira yekunyorera sei visa yeMexico? Nhungamiro pfupi
Ungawana sei vhiza kuCosta Rica
Nzira yekuwana sei visa yeTurkey kubva kuIndia? Gwaro rinokurumidza revanhu veIndia kana chero munhu muIndia
Qatar pasipoti nyika dzisina vhiza
Tora Ruzivo nezveVenezuela Visa!
Ndezvipi zvinodiwa zve visa kuColombia?
Unoda Kuziva Syria Visa Zvinodiwa? Tarisa Pano!
Mexico pasipoti nyika dzisina vhiza, nyika dzipi dzisina vhiza-pasina yeMexico pasipoti?